SAADAAL: Mark Lawrenson Oo Saadaaliyey Semi-finalka FA Cup Ee Arsenal vs Man City & Man United vs Chelsea Iyo Kulamada 37aad Ee Premier League - Gool24.Net
SAADAAL: Mark Lawrenson Oo Saadaaliyey Semi-finalka FA Cup Ee Arsenal vs Man City & Man United vs Chelsea Iyo Kulamada 37aad Ee Premier League
July 17, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Toddobaadkan, waxa jira kulamo xaasaasi ah oo ka tirsan FA Cup oo semi-finalka ay Sabtida iyo Axadda ku ballansan yihiin Arsenal vs Manchester City iyo Manchester United vs Chelsea, kuwaas oo laba ka mid ah ay u gudbi doonaan finalka iyadoon sidii hore u dhici jirtay ciyaar is-arag labaad aanay kooxuhu yeelan doonin.
Tartanka FA Cup oo sannadkii 149aad la ciyaarayo, waxa ay afartan kooxood iskugu tegi doonaan garoonka Wembley po markii ugu horreysay iyadoo aanay taageereyaal joogin lagu ciyaarayo.
Manchester City oo koobka difaacanaysa, 13 jeerna ku guuleysatay ayaa Sabtida la ciyaari doonta Arsenal, waxaana midkooda soo baxa uu sugi doonaa Manchester United iyo Chelsea oo Axadda ku kala bixi doona isla Wembley Stadium.
Khabiirka BBC Sports ee Mark Lawrenson oo xilligii uu ciyaartoyga ahaa kusoo guuleystay koobka isaga oo ka tirsanaa Liverpool, ciyaartii ugu dambaysayna ay sannadkii 1986kii ku garaaceen Everton, ayaa soo saaray saadaasha kulamadan.
“Kubadda cagtu waxay ka dhacaysaa garoomo albaabadu u xidhan yihiin, laakiin in semi-finalku uu ahaado taageereyaal la’aan, waa wax laga xumaado.” Ayuu yidhi Khabiirku ka hor inta aanu saadaasha u gelin.
Mark Lawrenson waxa uu kulanka Sabtida qalbi jab ugu sii bushaareeyey Arsenal oo June 17 si xun ay Manchester City ugu bahdishay Etihad Stadium, waxaanay Arteta iyo xiddigihiisu guuldarro labaad oo weyn kasoo gaadhi doontaa ciyaartan.
Manchester City waxay ku garaaci doontaa Arsenal 2-0 sida uu khabiirku saadaaliyey, laakiin waxa isla natiijadaas oo kale ku dhamaan doonta ciyaarta Manchester United iyo Chelsea.
Khabiirku waxa uu saadaaliyey in Red Devils ay guul la mid ah midda Man City oo kale ay ka gaadhi doonto Blues, ayna la iman doonto libin 2-0 ah.
Ciyaarta finalka ayay iskugu soo hadhi doonaan labada kooxood ee reer Manchester ee Manchester United iyo Manchester City, laakiin waxa la eegi doonaa waxa ka rumooba saadaasha Mark Lawrenson.
Saadaasha semi-finalka FA Cup ee Mark Lawrenson
Dhinaca kale, Mark Lawrenson waxa uu saadaaliyey kulamada horyaalka Premier League ee usbuucan oo ay ciyaarayaan lix kooxood, inta kalena ay usbuuc dhamaadka kulamadoodu noqonayaan.
Leicester City oo kaalinta afraad ku jirta ayaa u tegi doonta Tottenham oo uu Jose Mourinho kula dedaalayo inay Europa League timaaddo, sidaas oo kale, Burnley oo uu hunguri kaga jiro inay la loollanto Spurs iyo Arsenal ayaa marti u noqonaysa Norwich oo heerka labaad u degtay.
Mark Lawrenson oo kulamadan saadaaliyey, waxa uu niyadjab ugu sii bushaareeyey Leicester City oo guul-darro 2-1 ah kala soo laaban doonta ciyaarta Tottenham ay ugu tegayso, waxaanay taasi fursad u noqon doontaa Manchester United oo saddex dhibcood ka sare mari doonta, halka ay kulanka ugu dambeeyana Red Devils iyo Foxes wada leeyihiin.
Saadaasha kulamada Premier League ee usbuucan ee Mark Lawrenson
Tottenham 2-1 Leicester City
Haddaba akhriste, Adiguna saadaali kulamada semi-finalka FA Cup iyo ciyaaraha Premier League ee toddobaadkan, farriintaadana ku qor halka falanqaynta loogu talo-galay ee hoose.
C/shakour jeezto says:
Arsenal 2 : 1 Man City
Chelsea 1 : 3 man united
Tottaham 3 : Leicester 1
caadi baa u saadaalisay
Hassan Hared says:
man utd 3 vs chalsea 0
man city 4 vs arsenal 1
Mustafe QopcadeH says:
Arsenal :2 man city 1
Man utd :3 chelsea o
Chelse:2 vs man united 1
Man city 3: vs arsenal 1
Ali hahi says:
Man u vs chaksea 2:1
Arsenal vs man city 1:0
Abdihahir Kismayo says:
Arsenal 2 mancity 4
MN United 3 Chelsea 1
Chelsea 2 Manchester 1
Chelsea 2 vs Manchester 1
Manchester city 4 vs arsenal 3
Tarsan apdalla says:
arsenal 2 city 1
Chelsea 2.0 man unto 0
C/xakim c/qadir sh. says:
Arsenal vs man city =1:2
Chelsea 0- 3 Manchester United
Ahmed 14k says:
Hadalka iska saxa magafe waa Alle Man city 13 jeer kuma guulaysan FA cupka ee Malaha Man utd ayaad kuqaldesaa iska Sax fadlan
Dhanka kale hadaan sadaliyi kulamada FA cupka dhacaya waa Aida tan
Man utd 0-2 chelsea
Mancity 4 vs 0 arsenal
Arsenal vs Man city 3 _ 1
Chelsea vs Man utd 2 _ 2
cabdi bare ismaaciil says:
tottenham 2 1 liester city norwish city0 2 burnley
m city 0 2 arsenal m uinted 1 2 chelsea bournemouth1 1sothampton
Abdifatah omar says:
Man u 2 Chelsea 0